आखिर आयुर्वेद के हो?? | Ayurveda Khabar
आखिर आयुर्वेद के हो??
आखिर आयुर्वेद के हो??– नेपाली समाजमा आयुर्वेद भनेको हर्रो ,वर्रो अमला मात्रै बुझिन्छ । तर यसको अस्तित्व यतिमा मात्र सीमित छैन , वैग्यानिक ढङ्ग र प्राचीन पद्धति बाट गरिने उपचार , योग, साधना आदि सबै आयुर्वेदमा पर्छन् ।आयुर्वेद के सुस्त गतिको उपचार हो??
– पक्कै होइन, औषधीको सही मात्रा र सही औषधीको प्रयोग गरे उपचार छिट्टै हुन्छ । चिकित्सकको कमी भएर पनि दक्ष जनशक्ति छैनन् र अर्ध दक्षले गर्ने उपचार भरपर्दो हुदैँन ।आयुर्वेद नै किन रोज्ने??
– एलोपेथिक औषधी भनेको बिराम रोक्ने मात्र हो निको पार्ने होइन । अर्थात बिषयुक्त औषधी सेवन गर्दा तपाईँ अहिले छिट्टै निको हुनुहुनेछ तर त्यही औषधीले ६० बर्ष कटेपछी हानी पुर्याउँछ , के त्यस्तोलाई निको पारेको भन्ने हो?? होइन ,त्यो भनेको अहिले २० बर्षमा लागेको रोग ६० बर्षमा सार्नु जस्तै हो । तर प्राकृतिक उपचार गरेको खण्डमा तपाईँ स्थायी रुपले नि निको हुनुहुनेछ ।आयुर्वेदको स्कोप छैन अरे हो??
– आँखामा पट्टी बाँध्नेहरुले भनेँ होला त्यसो, तर वास्तविकता अर्कै छ । आयुर्वेद अनादी हो यसको स्कोप धेरै अगाडी देखि नै थियो तर प्राय: भारत र नेपालमा मात्र विकसित थियो । अहिले यसको महत्व वढेसँगै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया क्याम्पसले पनि आयुर्वेद बिषयको पढाई यो बर्षदेखि सुरु गरेको छ । अष्ट्रेलियामा पनि यसको महत्व बढेसँगै विद्यार्थीहरु भारत आएर पढ्न सुरु गरिसके । अबको बर्षमा यसको स्कोप अथाह स्कोप हुनेछ ।के नेपालमा सरकारी आयुर्वेद अस्पताल छन्??
– हर जिल्लामा एउटा छन् अनि क्याम्पसमा पनि उपचार हुने गर्छ । हामीले थाहा नपाएका मात्र हौँ ।
(लेखकले आफ्नो परिचय बताउनु भएको छैन)
Previous articleयोगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै
Next articleMerkel warns coronavirus crisis ‘still just the beginning’
कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश ५ द्वारा आयुर्वेद चिकित्सक परिचलान
रुपन्देही १६ बैशाख । प्रदेश पाँचको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले आयुर्वेद चिकित्सामार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गरी आयुर्बेद तथा...
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै
Ayurveda Khabar - January 19, 2020 0
सरकारले आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । पूर्वीय दर्शन, योग, परम्परागत चिकित्सा, जडीबुटीलगायतको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना...